Myanmar Mortgage Guide mortgage : YgnHome.com
Mortgage Guide (အပေါင် လမ်းညွှန်)
Myanmar Mortgage Guide
Myanmar Mortgage Guide Myanmar Mortgage Guide
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အခွန်ကောက် ဥပဒေကြမ်းနှင့် အိမ် ခြံ မြေ စျေးကွက် လှိုင်းဂယက်
လူနေထိုင်ခွင့်မရသေးသည့် အဆောက်အအုံတွင် တိုက်ခန်းငှားနေထိုင်ခဲ့လျှင်
တရားရုံးမှ လေလံတင် ရောင်းချမည့် အိမ် မြေ တိုက်ခန်းသည် အမွေဆိုင် ဖြစ်နေလျှင်
သတိပြုသင့်သည့် အိမ် မြေ အဝယ်ထပ်ခြင်း
ပေးကမ်းခြင်း စာချုပ်ဖြင့် အမွေခွဲဝေပေးထားသည့် အိမ်နှင့် မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
The Condominium Law Pyidaungsu Hluttaw Law No. 24, 2016 (29th January 2016) The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this law. Chapter (1) Title and definitions 1. This Law shall be called the Condominium Law. 2. The following expressions contained in this law shall have the meanings given hereunder- (a) Condominium meansabuilding constructed according to […]
စရန်ငွေပေး ကတိစာချုပ်၏ အဓိက ကျမှု
မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းက ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူ ထံရောက်လာပြီး တိုက်ခန်းဝယ်မည် ဖြစ်၍ စာရွက်စာတမ်းများ ကို ကြည့် ရှုစစ်ဆေးပေးရန် လာခေါ်ပါသည်။ သို့နှင့် စာရေးသူသည် မိတ်ဆွေနှင့် အတူ ရောင်းမည်ဆိုသည့် တိုက်ခန်း ရှိရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ဆိုသူနှင့် အိမ် ပွဲစားများကို တွေ့ရသည်။ တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်မှ ယင်းတိုက်ခန်း ဝယ်စဉ်က ချုပ်ဆိုခဲ့သော တိုက်ခန်း အရောင်း အဝယ်စာချုပ်ကို ထုတ်ပြပါသည်။ စာချုပ်ပေါ်တွင် ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ နှင့် သက်သေနှစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် မြေရှင်၏ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ထိုးထားသည်ကို မတွေ့ရှိရပေ။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူမှ ရောင်း မည့်သူအား အဆိုပါ တိုက်ခန်းအ ရောင်းအဝယ်စာချုပ်၌ မြေပိုင်ရှင်၏ လက်မှတ်မပါရှိသည့် […]
အမွေမမီမြေးများနှင့် ဆက်စပ်နေသော အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“သြရသ သားသမီးက အမွေ ဘယ်လိုခံစားခွင့်ရှိသလဲ ဆရာ”
“ဖခင်ကွယ်လွန်လျှင် သြရသ သားသည်လည်းကောင်း၊ မိခင်ကွယ် လွန်လျှင် သြရသသမီးသည်လည်း ကောင်း၊ အမွေ၏ လေးပုံတစ်ပုကို ရခွင့်ရှိတယ်လို့ မလှဦးနှင့် မောင်ရွှေ ရင် ရန်ကုန်စီရင်ထုံး အတွဲ (၁) စာ မျက်နှာ-၃ရဝ အမှုမှာ လမ်းညွှန်ဆုံး ဖြတ်ထားပါတယ်”
“ဒါဆိုရင် အခုကိစ္စမှာ သား အကြီးက အရင်ကွယ်လွန်သွားတာ မဟုတ်လား”
“မိခင်မကွယ်လွန်မီ သားအကြီး က အရင်ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် မိခင်ကြီး မကွယ်လွန်မီမှာ သားအကြီးကို သြရသသားသမီးအ ဖြစ် အမွေခွဲပေးထားခဲ့ရင်တော့ ယခု အမွေမမီ မြေးများက ရပိုင်ခွင့်ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး”
“စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ-၈၁ (က) မှာ မြို့တော်နယ် နိမိတ်အတွင်းရှိ အဆောက်အအုံ တစ်ခုသို့မဟုတ် ယင်း၏ အစိတ်အ ပိုင်းတစ်ခုခုသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်း ဘေး အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ကြောင်း သို့ မဟုတ် လူနေထိုင် အသုံးပြုရန် သင့် လျော်ခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ လျှင် အဆောက်အအုံ၌ နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်အား ဆက်လက် နေထိုင်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါ က ယင်းအဆောက်အအုံမှ ဖယ်ရှား ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်တည်ဆောက် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဖြိုဖျက်စေခြင်း ကို ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်း ထားပါတယ်”
ဘာသာမတူသည့် မိသားစုပိုင် အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“သိပ်တော့ ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဒေါ်မာလာပါ ငါးဦးနှင့် ဒေါ်မြင့်မြင့် ခိုင်ပါ လေးဦး၊ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ (၁) အမှုမှာ သမီးဖြစ်သူသည် မူလက အမွေရှင်မိခင်နည်းတူ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခဲ့ လျှင် ထိုသို့ ပြောင်းလဲကိုးကွယ်မှု ကြောင့် မိခင်ထံမှ အမွေရပိုင်ခွင့် မဆုံးရှုံးနိုင်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာကူးပြောင်း ကိုး ကွယ်ခြင်းကြောင့် မူလကိုးကွယ်သည့် ဘာသာအရ အမွေဆက်ခံရရှိခွင့်ကို ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရတယ်”
“အခုကိစ္စမှာလည်း သမီးဖြစ်သူက မူလက အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုး ကွယ်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကူးပြောင်းခဲ့တာမှန်တယ်ဆိုရင် အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိတယ်ပေါ့”
အိမ်မြေ ဝယ်ယူနေထိုင်ပြီး နှစ်ကာလကြာမှ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလျှင်
“တရားသူကြီးက တစ်ဖက် သတ်လျှောက်ထားသူကို စစ်မယ်၊ သက်သေစစ်မယ်၊ စာရွက်စာတမ်း အရ ဝယ်ယူထားပြီး လက်ရှိနေလျက်ရှိတာ ပေါ်လွင်မယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်အတွင်း ဘာကြောင့်မလျှောက် ထားရကြောင်း အကြောင်းပြချက် ခိုင်မာရင် ရောင်းသူအဖြစ် တရားရုံး ရှိ ဘိလစ်က တာဝန်ယူလက်မှတ် ရေးထိုးပြီး အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံ တင် စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ ချုပ် ဆိုခွင့်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
အိမ်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အိမ်ပြင်မည်ဆိုလျှင်
အိမ်လခမှန်မှန်မပေးတာ၊ ငှား ရမ်းအဆောက်အအုံကို ညစ်ထေး အောင်၊ ဒါမှမဟုတ် ပျက်စီးယိုယွင်း အောင် ပြုလုပ်နေထိုင်မယ်၊ ပတ်ဝန်း ကျင်နေထိုင်သူတွေကို စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေမယ်၊ ဥပဒေနဲ့ မလွတ် ကင်းတဲ့ လုပ်ငန်းကို အဆောက်အအုံ အတွင်းမှာ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ငှားတာဝန်ဖောက်ဖျက်မှုအနေနဲ့ တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုပြီး နှင်ချပိုင် ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်”
“အချို့ အိမ်ငှားတွေက အိမ် အတွင်းမှာ လောင်းကစားလုပ်ရင် လည်း ဥပဒေအရ နှင်ချခွင့်ရှိတယ် ပေါ့”
မြေဂရန် မိတ္တူရှိသူထံမှ အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
အဲဒီ ပေ ၄ဝ x ပေ ၆ဝ မြေကွက်ထဲက အခုရောင်း မယ့် ပေ ၂ဝ x ပေ ၆ဝ မြေကွက် အပေါ် အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုရပါမယ်”
“ဒါဆိုရင် ဂရန်မူရင်းရှိသူက လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရမယ့် သဘော ပေါ့”
“မှန်ပါတယ်။ ပြီးမှမြေကွက်ခွဲ စိတ်ပေးဖို့ လျှောက်ထားရမှာဖြစ် တယ်”
“မြေကွက်က တစ်ဖက်သတ်ခွဲ စိတ်လို့ရပါသလား”
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဥပဒေအရ ကွာရှင်းပြီးနှစ်ဦးပိုင် အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“မှန်ပါတယ်။ ယင်းဥပဒေပုဒ်မ (၁၃) အရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူက ခုနစ် နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ် နိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့် သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အိမ် ထောင်ရေး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ကျန် သည့် မယား သို့မဟုတ် လင်က လင် မယားကွာရှင်းခွင့်ရှိတဲ့အပြင် အိမ် ထောင်ရေးပြစ်မှုကျူးလွန်သူက နှစ်ဦး ပိုင်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အခွင့်အ ရေးဆုံးရှုံးခံရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါ တယ်”
“ဒါဆိုရင် အခုအိမ်မြေအရောင်း အဝယ်ကိစ္စမှာလည်း လင်မယားကွာ ရှင်းတာက တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ဥပဒေအရ ကွာရှင်းတာဖြစ်လို့ လင် ယောကျ်ားအနေနဲ့ ပစ္စည်းခန်း ခံစား ခွင့်မရှိလို့ ပြောတာဖြစ်မယ် ဆရာ”
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင် ထုံး စာမျက်နှာ-၂၉ အမှုမှာ သားဖြစ် သူသည် အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် မိဘများနှင့်အတူ ဇနီးဖြစ်သူနှင့် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း မိခင်နှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့သည်။ လင်ယောကျ်ားကွယ် လွန်ပြီးနောက်တွင်လည်း ချွေးမဖြစ် သူသည် ယောက္ခမနှင့်အတူနေပြီး သုံးလအကြာမှ နောက်အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ချွေးမဖြစ်သူသည် ကွယ်လွန်သူ ခင် ပွန်းဖြစ်သူရရှိခံစားရမည့် အခွင့်အ ရေးကို ဆက်ခံရရှိပြီးမှ နောက်အိမ် ထောင်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ တရားစွဲဆို ချိန်တွင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဖြစ်သည့် ချွေးမသည် ကွယ်လွန်သူ လင်၏ သြရသအခွင့်အရေးကို ဆက် ခံပြီး ယောက္ခမထံမှ အမွေတောင်းခွင့် ရှိသည်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်”
ဝယ်ယူမည့် တိုက်ခန်းသည် နိုင်ငံခြားပြန်(ပြည်သူပိုင်) တိုက်ခန်း ဖြစ်နေလျှင်
“ယခင်က ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ တိုက်ခန်းတွေမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်လူမျိုး၊ အိန္ဒိယ လူမျိုး တွေ နေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံခြားသားပိုင် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်း ခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားတယ်။ အချို့နိုင်ငံခြားသား တရုတ်လူမျိုး၊ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေက မိမိသက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသို့ ပြန်သွားကြတယ်။ အဲဒီ နိုင်ငံခြားသားပိုင် တိုက်ခန်းတွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက သိမ်းဆည်း လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားပြန် တိုက်ခန်းများလို့ လွယ်လွယ်ကူကူ ခေါ်ပြောလာကြတာဖြစ်တယ်”
ကွယ်လွန်သူ အပျိုကြီးလူပျိုကြီးပိုင် မြေနှင့် အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
အမွေက စုန်ရတယ်။ ဆန်လို့မရဘူး။ ဒါ ကြောင့် လူပျိုကြီးရဲ့ အမွေကို အစ်ကို ဖြစ်သူက မရနိုင်ဘူး။ ညီမဖြစ်သူက သာရမယ်။ အစ်ကိုက မွေးတဲ့သားက လည်း ဦးလေး အမွေကိုမရဘူး။ ညီမ ငယ်ရဲ့ သားသမီးနှစ်ယောက်ကသာ အမွေရမယ်လို့ ပြောပါတယ်”
“လူပျိုကြီးရဲ့ မောင်နှမအရင်း တွေကလည်း ကွယ်လွန်သွားကြပြီ။ သူတို့သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုရင် တော့ သူတို့ပြောသလို အစ်ကိုကြီးက အမွေရခွင့်မရှိဘူး။ ညီမက အမွေရ ခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ တူ တူမတွေကြ တော့ မသက်ဆိုင်တော့ဘူး”
“ဥပဒေမှာ ဘယ်လိုများ သတ် မှတ်ထားပါသလဲ”
ဟန်ဆောင် မွေးစားစာချုပ် ရှိပါသလား
“အိမ်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ ကျွန် တော်သွားကြည့်တယ် ဆရာ။ မြေက တော့ ဂရန်မြေကွက် နှစ်ထပ်တိုက်၊ ပေ ၂ဝ x ပေ ၆ဝ ရှိမယ်။ ရောင်း မယ်ဆိုတော့ အမွေဆိုင်အိမ်ဖြစ်နေ တယ်။ မြေကွက်အမည်ပေါက်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဖခင်အမည်ပေါက် ဖြစ်တယ်။ မိခင်ကြီးကလည်း ဆုံးပါး သွားပြီ။ ဒါကြောင့် မောင်နှမ သုံးဦး က အမွေခွဲဖို့ ရောင်းတာ ဆရာ”
“မောင်နှမသုံးဦးထဲမှာ ကိတ္တိမ မွေးစားသားသမီးပါလို့လား”
“မောင်နှမ သုံးဦးမှာ အစ်မကြီးက အပျိုကြီး ယခုလက်ရှိတူ၊ တူမတို့ နဲ့ အတူနေထိုင်တယ်။ အလတ်မောင် ဖြစ်သူနဲ့ ညီမအငယ်က သူတို့အိမ် ထောင်နဲ့သူ သီးခြားနေကြတယ်။ အခုကိစ္စက လက်ရှိအိမ်မှာနေတဲ့ တူ နဲ့ တူမက အဘွားဖြစ်သူက သူတို့ကို ကိတ္တိမမွေးစားစာချုပ်နဲ့ မွေးစားတာ ကြောင့် အမွေဝေစုရသင့်တယ်လို့ ကန့်ကွက်တာ ဆရာ”
သေချာတေ့ တေ့ဆိုင်ဆိုင် စျေးတည့်ကြပြီဆိုရင် တော့ သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာ မြေယာဌာနမှာ သွားရောက်စုံစမ်းရ ပါမယ်”
“ရောင်းသူကို ခေါ်သွားဖို့လိုသ လား”
“အကောင်းဆုံးကတော့ ရောင်း သူကိုယ်တိုင်ခေါ်သွားပြီး မူရင်းပြသ မေးမြန်းစုံစမ်းရမှာဖြစ်တယ်”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်အကန် ဟုတ် မဟုတ်ဆိုတာကတော့ သက် ဆိုင်ရာ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ မြေယာဌာနမှာ စာရွက် စာတမ်းပြပြီး စစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်။ ဂရန်မြေကတော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဇနီး နဲ့ သမီးပြောသလို စာချုပ် စာတမ်း ရုံးမှာ မှတ်ပုံတင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက် တာနဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ တရားဝင်ပိုင် ဆိုင်မှုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်”
“ပါမစ်မြေက မှတ်ပုံတင်စာချုပ် စာတမ်းရုံးမှာ စာချုပ် ချုပ်ဆိုလို မရ ဘူးလို့ ပြောတယ်ဟုတ်သလား”
တချို့က မှတ်ပုံ တင်မှာ ဒေါ်ငွေရင်ဖြစ်နေပြီး အိမ် ထောင်စုစာရင်းမှာ ဒေါ်ရင်ဖြစ်နေ တာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်”
တူ၊ တူမများ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေမှာ အမွေ ဆက်ခံမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မျိုးရိုးစဉ် ဆက် သတ်မှတ်ထားချက်ရှိကြောင်း တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်တဲ့ ဦးမြင့်စိုး နှင့် ဦးသန်းစိုးပါ လေးဦး၊ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ -၈၄ မှာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံး တမ်း ဥပဒေအမွေခန်း ဥပဒေအရ ကွယ်လွန်သူတွင် ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သား သမီး၊ မြေး၊ မြစ်၊ အစရှိသော တိုက် ရိုက်အဆက်အနွယ်များ၊ ကိတ္တိမ သားသမီး၊ လင်ပါမယားပါ သားသမီး နှင့် ကိဠိတ သားသမီးအစရှိသူများ မရှိလျှင် ထိုသူ၏ အမွေပစ္စည်းများကို ဆက်ခံခွင့်ရှိသည့် ဆွေမျိုးသားချင်း၏ အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် သည်။
မိဘနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦး ကွယ်လွန်ပြီး ကျန်တစ်ဦးက နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင် ကျန်ရှိတဲ့ သားသမီးက အမွေတောင်းခွင့်ရှိတယ် လို့ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ရောင်းသူ မိန်း ကလေးပြောသလို ဖခင်ဖြစ်သူက နောက်အိမ်ထောင်ပြုစဉ်မှာ သားဖြစ် သူကို အမွေခွဲဝေပေးပြီးကြောင်း အ ထောက်အထားရှိရင်တော့ ထပ်မံ တောင်းခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့”
လင်မယားကွာရှင်းပြီးမှမွေးဖွားသည့် သားသမီးနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ ကျွန် တော်တို့ သိထားတာက လင်မယား ကွာရှင်းပြီးနောက် ဖခင်နှင့်အတူ လိုက်နေတဲ့ သားသမီးသည် ဖခင်ထံ မှ အမွေဆက်ခံခွင့်ရပြီး မိခင်ထံမှ အမွေဆက်ခံခွင့်ဆုံးရှုံးမယ်။ မိခင်နဲ့ လိုက်နေသည့်သားသမီးသည် ဖခင် ထံမှ အမွေဆက်ခံခွင့်မရှိဘူးလို့ သိ ထားတယ် ဆရာ။ အခုကိစ်္စမျိုးမှာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲ”
“အခုကိစ္စက လင်မယားကွာရှင်း ပြီးမှသားသမီး မွေးခဲ့တာဆိုတော့ ကွာရှင်းချိန်မှာ မိခင်နဲ့ လိုက်ပါနေ တယ်။ ဖခင်နဲ့ လိုက်ပါနေတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေနဲ့ တိုက်ရိုက်အကျုံးမဝင် ပြန်ဘူး”
“ကလေးကလည်း အရွယ်မ ရောက်သေးတော့ မိခင်က ဦးဆောင် ပြီး အုပ်ထိန်းသူအနေနဲ့ တောင်းဆို တာ ဆရာ”
အမွေဆိုင် အိမ် နှင့် မြေကို ခွဲစိတ်ဝယ်ယူပိုင်ခွင့်
“ဒါကတော့ ဒီလိုပါ။ အမွေဆိုင် အိမ်နဲ့မြေပေါ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အမွေ ရှင်တွေကလည်း အဲဒီနေရာပတ်ဝန်း ကျင်ကနေ ခွဲခွာမသွားချင်ဘူး။ အမွေ ဆိုင်အိမ်မှာ မဟုတ်ဘဲ အခြားနေရာ မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပူးတွဲအမွေဆိုင်တွေ ကလည်း အမွေဝေစုရချင်တယ်။ ဒီ တော့ အမွေဆိုင်အိမ်နဲ့ မြေပေါ်မှာ လက်ဝယ်နေသူတို့အပေါ် တရားစွဲဆို တောင်းရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ကြ တယ်”
“အခုကိစ္စမှာ အမွေရှင်အားလုံး စုပေါင်းနေတယ်ဆိုတော့ အမှုအခင်း ဖြစ်တဲ့အထိ မရောက်နိုင်ဘူးလို့ထင် တာပဲ ဆရာ”
“ဟုတ်ပါတယ်။ အားလုံးညှိနှိုင်း လို့ရတာမို့ ရောင်းဖို့အသံထွက်လာ တာပေါ့”
ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာမတူသည့် မိဘများပိုင် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“မှန်ပါတယ်။ မကွယ်လွန်မီမှာ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကူးပြောင်းသွားလို့ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ဓလေ့ထုံးစံနဲ့အညီနာရေး ဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အရှာဘီဘီနှင့် မောင်ကျော်ရင်အမှု ဘီအယ်ဘီအတွဲ ၁၃ စာမျက်နှာ -၂ဝရ မှာ မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းသွားသူ၏ အမွေကို ၎င်း၏ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သားသမီးဆွေမျိုးများက ဆက်ခံ ခွင့်မရှိလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာပေါ်မူတည်ပြီး ယင်းကိုးကွယ်ရာ ဘာသာဓလေ့ထုံးစံနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြရပါတယ်။
ဝယ်ထားသော တိုက်ခန်းတွင် ဆိုင်ခန်းဖွင့်မည်ဆိုလျှင်
လစဉ်ငှားရမ်းခပေးတဲ့စနစ်၊ စပေါ်ငွေပေးစနစ်နဲ့ အပျောက်ငွေပေးစနစ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ လစဉ် ငှားရမ်းခပေးစနစ်ကတော့ လစဉ်လဆန်းရက်တိုင်းမှာ အိမ်ငှားရမ်းခပေးသွင်းတဲ့ စနစ်ဖြစ်တယ်။ စပေါ်ငွေဆို တာကတော့ အာမခံသဘောမျိုးတင်ထားတဲ့ ငွေကြေးဖြစ်တယ်။ အိမ်ငှားက ငှားရမ်းခြင်းပြတ်စဲပြီး အဆောက် အအုံမှ ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာ စပေါ်ငွေကို အိမ်ရှင်က ပြန်လည်ပေးအပ်ရတဲ့ စနစ်ဖြစ်တယ်။ အပျောက်စနစ် ကတော့ မိမိနေထိုင်တဲ့ တိုက်ခန်း၊ အိမ်ခန်းကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီး လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိတယ်။ ဒါအပြင် ဝယ်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းကိုအခြား တစ်ဦးထံ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီး ထပ်မံလွှဲပြောင်းခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စပေါ်ငွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အပျောက်ငွေနဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်၊ တိုက်ခန်း အိမ်ခန်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေဟာ မြေရှင် အိမ်ရှင်ကို လစဉ်အိမ်ငှားရမ်း ခပေးရတဲ့အတွက် ဥပဒေအရ အိမ်ရှင်အိမ်ငှားဆက်စပ်မှုရှိနေမှာဖြစ်တယ်”
ဘဏ်ချေးငွေအပါအဝင် လစဉ် အရစ်ကျငွေချေစနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်း ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဘဏ်က တစ်နှစ်ကို ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ပြီးအရစ်ကျပေးဆပ်ခွင့်ပြုတယ်လို့ သိရတယ် ဆရာ”
“ဘဏ်ငွေကတော့ အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ကြတာရှိပါတယ်။ တချို့ဘဏ်တွေက ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ် တာရှိပါတယ်။ နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုမှာ အိမ်ရာချေးငွေ အတိုးနှုန်းကို ပထမတစ်နှစ်အတွင်း ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ချေးငွေရယူသူက အတိုးအရင်းမှန်မှန်ပေးသွင်းပါက နှစ်စဉ် ဝ ဒသမ ၅ ရာခိုင် နှုန်းစီ လျော့ကျကာ အနည်းဆုံး ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းသာအတိုးပေးသွင်းရသည့် ခံစားခွင့်နဲ့ ချေးငွေကျပ်သိန်း ၁၅ဝ ထုတ်ချေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်”
“ဘဏ်ချေးငွေပမာဏက မိမိချေးယူလိုတဲ့ ငွေပမာဏ ရရှိနိုင်ပါသလား ဆရာ”
“ကွန်ဒိုမီနီယမ်တိုက်ခန်းတွေဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆောက်နေတဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားပါ သလဲ” “ဥပဒေအရ ကွန်ဒိုမီနီယမ်အများဆိုင် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မယ်ဆိုရင် မြေဧရိယာ အနည်း ဆုံး စတုရန်း ပေ ၂ဝဝဝဝ နှင့်အထက်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရပ်ကွက်ထဲက ပေ ၄ဝ x ပေ ၆ဝ စသဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ကွန်ဒိုအဆောက်အအုံတွေဟာ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံတွေ မဟုတ်ကြဘူး”
တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကွယ်လွန်သွားသည့် လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် အိမ်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“အစောကပြောခဲ့တဲ့ မအိန်နဲ့ တင်ငါးအမှုမှာ တစ်ရက်ခြားပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တယ်။ မကဒူးနှင့် မယုံ (၁၉ဝ၄-၁၉ဝ၆) အထက် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး မြန်မာ့ဓလေ့အမွေခန်း စာမျက်နှာ (၇) မှာ လင်နဲ့မယားတို့သည် တစ်ယောက်သေဆုံးပြီး ငါးရက်ကြာမှ ကျန်တစ်ယောက်ကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်၍ နှစ်ဖက်ဆွေ မျိုးများမှ ညီတူမျှခွဲ ဝေခွင့်ရသွားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်”
“ဒါဆိုရင် ရက်ပိုင်းကွာခြားပြီး ကွယ်လွန်ရင်တော့ တစ်ပြိုင်တည်း နှစ်ဦးလုံးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ သတ်မှတ် နိုင်တာပေါ့နော်”
မိဘက သားသမီးအမည်ဖြင့် ဝယ်ထားသည့် အိမ်နှင့် မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ မြေနဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူက ကန့်ကွက်လို့ရမလဲ။ ဒါပေမယ့် မိဘကဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးဦးက ၎င်းပိုင်ငွေနဲ့ သားသမီးကိုဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ အမည်ပေါက်အဖြစ် ဝယ် ပေးထားရင်တော့ အမည်ပေါက် သူက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ဥပဒေအရတော့ အမည်ငှားအဖြစ်ဝယ်ထားတာ ဖြစ်တယ်”
“တို့က မကြာသေးမီရက်ပိုင်းမှာ ဂရန်မြေနဲ့အိမ်ကို ဝယ်လိုက်တယ် သူငယ်ချင်း”
“ငွေတော့ အကြေမချေရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စရန်ငွေတော့ချပေးခဲ့တယ်။ ရောင်းသူအမည်ပေါက် ဆိုတော့ ရှင်းတယ်ပေါ့ သူငယ်ချင်းရယ်”
အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ဖြေလျှော့သွားမည့် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဝင်ငွေပြနိုင်ပါက ယင်းဝင် ငွေကိုနှုတ်ပြီး ကျန်တဲ့ စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ် တစ်ကျပ်မှကျပ်သိန်း ၃ဝဝ ထိကို ဝင် ငွေခွွန်နှုန်းထား ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း။ ကျပ် သိန်း ၃ဝ၁ မှ ကျပ်သိန်း ၁ဝဝဝ ထိကို ဝင်ငွေခွန်နှုန်း ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ၁ နှင့် အထက်ကို ဝင်ငွေခွန်နှုန်း ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”
ရောင်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နေထိုင်သူရှိသော အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မိလျှင်
”ငွေအကြေပေးမယ့် ရက်မှာပဲ အိမ်အပ်ဖို့ အခက်အခဲရှိနေတယ်။ ပြောင်းရွှေ့ဖို့နေရာလည်း မတွေ့သေးလို့ တစ်လစောင့်ပါဆိုတာနဲ့ စောင့်ပေးခဲ့တယ်။ အခုတစ်လစေ့တော့လည်း ဖယ်မပေးသေးတော့ စိတ်ဆင်း ရဲနေရတာပေါ့ ဆရာ”
”ဒါနဲ့ အိမ်ဆိုတော့ မြေနဲ့အိမ်ကို ဝယ်လိုက်တာ ထင်တယ်”
”ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ၊ စရန်ငွေ ပေးစဉ်က ကန့်ကွက်ရန်ရှိ မရှိ သတင်းစာထဲမှာ ကြော်ငြာထည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ ကန့်ကွက်သူမရှိခဲ့ဘူး”
”မြေက ဂရန်မြေပဲလား၊ အမည်ပေါက်သူက ရောင်းသူကိုယ်တိုင်လား”
”ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁ဝ၈ မှာ အငှားချထားသူနဲ့ ငှားယူသူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတာဝန်တွေကို ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ အငှားစာချုပ်မှာလည်း ငှားရမ်းခြင်းကာလ တစ်နှစ်ထက်ကျော်လွန်ပြီး အငှားချထားမယ် ဆိုရင် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုရမှာ ဖြစ်တယ်”
”တစ်နှစ်အောက်ကာလအတွက် ငှားရမ်းခြင်းဆိုရင် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မပြုလုပ်ဘဲ အရပ်ကတိစာချုပ်နဲ့ ရတယ်မ ဟုတ်လား”
”မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရဆိုရင် အမည်ပေါက်သူနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့မှာ လင်ယောကျ်ားဖြစ်သူက ဦးစွာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် လင်ယောကျ်ားရဲ့ ဝေစုဟာ ဇနီးသည်ထံ ရောက်ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
”အစကတည်းက ဇနီးအမည် ပေါက်ဆိုတော့ လင်ယောကျ်ားက မဆိုင်တော့ဘူး။ မဟုတ်လား”
”အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ လင်မယားနှစ်ဦး လက်ထက်ပွား ပစ္စည်းဆိုရင် မြေအမည်ပေါက်သည့်တိုင် လင်မယားနှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ် ဥပဒေအရ တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ပွန်းက အရင်ကွယ် လွန်တဲ့ အတွက် မြေနဲ့အိမ်ဟာ ဇနီးတစ်ဦးတည်းသာ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတယ်”
”သားသမီးမွေးစားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့က တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာပဲရှိတဲ့ အထူးဥပဒေတစ်ရပ်ဖြစ် တယ်။ အဲဒီမှာ ကိုစိုးပိုင်မေးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးက ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာမတူသူကို မွေးစားခွင့်ရှိသ လားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မွေးစား မိဘနှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာမတူသူတို့အား သားသမီးအဖြစ် မွေးစားရန် ဓမ္မသတ်များက တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိပေဟု တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ (မပွင့်နှင့်မရင်) Ma Bwin Vs Ma Yin S.J.100 အမှုမှာ ဆုံးဖြတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာကိုးကွယ်ရာ မတူပေမယ့် ကိတ္တိမ မွေးစား စာချုပ်မှတ် တင်ထားရင်တော့ အမွေစား အမွေခံ သားသမီးအဖြစ် အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
”ဒါဆိုရင် အခုပြောတဲ့ ကိတ္တိမ မွေးစားစာချုပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးနဲ့ အရောင်းအ ဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ပြုလုပ်လို့ရပြီပေါ့”
မပယ်ဖျက်နိုင်သောခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေသည့် အိမ်ကို ဝယ်လျှင်
”ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထားတယ်ဆိုတာက အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင် မိမိပိုင်အိမ်၊ အဆောက်အအုံ မြေပေါ်မှာ ငွေကြေး တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှမယူဘဲ အခမဲ့ထားခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်”
”တကယ်လို့ မိဘတွေက သူတို့ ပိုင်အိမ်မှာ သားသမီးကို နေခွင့်ပေးထားရင် ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်တာပဲပေါ့ ဟုတ်ပါသလား”
”ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူပိုင်တိုက်ခန်းကို ရောင်းချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ သူလည်း ကျန်း မာရေးမကောင်းအသက်လည်း ကြီးပြီဆိုတော့ ဆေးကုသဖို့နဲ့ အလှူအတန်းပြုသွားချင်တယ်။ ဝယ်နိုင်ရင် ဝယ်ပါလို့ လာပြောတယ်”
မိဘများကွယ်လွန်ပြီး အမွေမခွဲဝေရသေးသည့် သားသမီးများနှင့်ဆက်စပ်သည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်လျှင်
”အိမ်နဲ့မြေ ဝယ်လိုက်တာ ဆရာ။ စရန်ငွေပေးပြီးမှ ကန့်ကွက်သူပေါ်လာလို့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ ဆရာ”ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်သူက စာရေးသူထံ လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
”အိမ်နဲ့ မြေဆိုတော့ မြေက ဂရန်မြေလား။ အမည်ပေါက်က ဘယ်သူလဲ၊ ရောင်းသူကိုယ်တိုင်ပဲ လား”
”မြေက ဂရန်မထွက်သေးဘူး ဆရာ”
”ဒါဆိုရင် ပါမစ်မြေပေါ့။ အဆင့်ဆင့်ဝယ်ထားတဲ့ မြေကွက်လား”
မယားပြိုင်အဖြစ် ဆက်စပ်နိုင်မည့် အိမ် မြေကို ဝယ်မိလျှင်
”ဝယ်သူနဲ့ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးမှ သူက မယားပြိုင်တစ်ယောက်ပါဆိုပြီး အဲဒီအိမ်မြေကို အရောင်းအဝယ် လွှဲပြောင်းပေးကမ်းပေါ့ ဆရာ။ မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ကြေညာတာ ဆရာ”
”သားသမီးတွေက ဖခင်နောက် အိမ်ထောင်ပြုထားတာ မသိဘူးလား”
”သိတော့ သိတယ်။ အတူနေတာ မဟုတ်တော့ မသိသလိုပဲနေကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဆက်အဆံလည်း မရှိကြဘူး”
မြေအိမ်တန်ဖိုး သိန်းတစ်ထောင်ထက်ကျော်ရင်တော့ ဝယ်ခွန်အနေနဲ့ ဝင်ငွေရလမ်း မဖော် ပြနိုင်ရင် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းထိ ချမှတ် ကောက်ခံနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ငှားရှိသည့် အိမ်ကို အသစ်ပြန်ဆောက်မည်ဆိုလျှင်
အိမ်ရှင်ဖြစ်သူသည် ၎င်း၏ လက်ရှိ အဆောက်အအုံကို အသစ်ဆောက်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် အရေးကြီးသော ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲသော ပြုပြင်မှု များ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရိုးဖြောင့်သော သဘောဖြင့် ၎င်း၏ အဆောက်အအုံကို ရယူလိုပါက အိမ်ငှားအား ဖယ်ရှား ပေးရန် တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
“အမွေရှင် မိဘများကွယ်လွန်ပြီးမှ ကွယ်လွန်တဲ့ သားသမီးက မွေးဖွားသည့် သားသမီးကို အမွေမီမြေးလို့ ခေါ်တယ်။ အမွေမမီမြေးဆိုတာကတော့ အမွေရှင်မိဘတစ်ဦးဦးဖြစ်စေ၊ နှစ်ယောက်လုံးဖြစ်စေ၊ မကွယ်လွန်မီ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သားသမီးက မွေးဖွားတဲ့ သားသမီးကို အမွေမမီမြေးလို့ ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားပါတယ်”
အဆောက်အဦးအသစ်အတွက် လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C အကြောင်း
ယခုအခါ လျှပ်စစ်ဌာနမှ တိုက်ခန်းအလိုက် မီတာတစ်လုံးစီတပ်ဆင် နိုင်ရေးအတွက် လူနေထိုင်ခွင့် လက် မှတ်ရရှိပြီးမှသာ ခွင့်ပြုပေးသည်များရှိလာသဖြင့် တိုက်ခန်းဝယ်သူများ ဝင်ရောက်နေထိုင်ရန် အခက်အခဲရှိ လာပြီဖြစ်သည်။
မြေငှား၍ ဆောက်ထားသည့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျင်
“ယခင်ခေတ်ကာလမှာတော့ B.O.T စနစ်ဆိုတာ ခေတ်စားခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရရုံးရှိရာ မြေကွက်တွေမှာ နှစ် ၅ဝ မြေငှားနဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေ ဆောက်တာရှိတယ်”
“နှစ် ၅ဝ အတွင်းမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ မြေရှင်က မြေငှားရမ်းခသာ ရရှိမယ်။ တိုက်ခန်းရောင်းရငွေနဲ့ အကျိုးအမြတ်၊ တိုက်ခန်းလခတွေကိုတော့ တိုက်ခန်းဆောက်လုပ်သူက ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်”
လူနေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်မရခင် တိုက်ခန်းအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်လျှင်
“တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခွင့်ပြုထား တဲ့ အဆောက်အအုံပုံစံနဲ့ ကွဲလွဲနေ လို့ဆိုပြီး လူနေထိုင်ခွင့် မရတာ လည်းရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်”
“အမှန်ကတော့ အဆောက် အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်နဲ့ လူ နေထိုင်ခွင့် အမိန့်က ဆက်စပ်နေ တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။
မြေငှားစာချုပ် (ဂရမ်) မိတ္တူမှန်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုမည်ဆိုလျင်
“ဂရန်မိတ္တူမှန်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီဂရန်မိတ္တူမှန်နဲ့ အ ရောင်းအဝယ်လုပ်လို့ရပါသလား ဆရာ” ဦးလှမြင့်က မေးပါသည်။
“သက်ဆိုင်ရာ မြို့ပြမြေစီမံဌာနက တရားဝင်ထုတ်ပေးတဲ့ မိတ္တူမှန်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်”
အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်း ငှားရမ်းခြင်းနှင့် အခွန်ကောက်ဥပဒေ
“စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီးထမ်းဆောင်ရတာက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေါ့”
“ဝင်ငွေခွန်ဆိုတော့ နှစ်တစ်နှစ် အတွင်းမှာ ဝင်ငွေကျပ် ၄၈ သိန်း အထက်ရမှ အခွန်စည်းကြပ်တာ မဟုတ်လား”
နိုင်ငံခြားသားများ အိမ် နှင့် မြေ ဝယ်ခွင့်ရှိပြီလား
“ဒါဆိုရင် မြေကိုငှားရမ်းပြီး လုပ် ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့”
“မှန်ပါတယ်။ မြေကို ဝယ်ယူပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး”
စားကျက်မြေကို ရောင်းဝယ်ခွင့် ရှိပါသလား
“ကျေးလက်ဒေသ တောင်သူ လယ်သမားများနှင့် မိသားစုတစ်နိုင် တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် ဧက (၅ဝ) ထက် မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြု နိုင်တယ်။ ကာလအားဖြင့်တော့ ခွင့် ပြုသည့်နေ့ကစပြီး နှစ်ပေါင်း ၃ဝ ထက်မပိုစေဘဲ အကြိမ်ကြိမ်ခွင့်ပြုနိုင် တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်”
လူနေထိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် လယ်ယာမြေများကို ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ပါသလား
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့ နိုင်ငံတော်ရှိမြေအားလုံး၊ မြေပေါ်မြေအောက် ရေပေါ်ရေအောက်နှင့် လေထုအတွင်းရှိ သယံဇာတ ပစ္စည်းအားလုံး၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင်သည် နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။
“မြေဧရိယာက အနည်းဆုံး စတုရန်းပေ ၂ဝဝဝဝ နဲ့ အထက်ရှိတဲ့ မြေပေါ်မှာ ဆောက်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ပေ ၄ဝ x ပေ ၆ဝ မြေကွက်တွေမှာ အများပိုင်ကွန်ဒို ဆောက်ခွင့်မရှိပါဘူး” စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံ၏ ရောင်းချ၍ရနိုင်သော စုစုပေါင်းကြမ်းခင်းဧရိယာ၏ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုရလို့ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာ တိုက်ခန်းကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းသည် အမှန်တကယ် အိမ်ပိုင်မရှိသည့် လိုအပ်သူအတွက် ရည်ရွယ် ရောင်းချသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနမှ အမှန်တကယ် နေထိုင်ခြင်းရှိ မရှိကို စိစစ် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ မိမိနေထိုင်ခွင့်ရထားသည့် တိုက်ခန်းတွင် အငှားချထားခွင့်မရှိပေ။ ငါးနှစ်အတွင်း လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့် လည်း မရှိဟု ပိတ်ပင်ထားပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန တွင် အမည်ပေါက်မှန်ကန်ခြင်းရှိ မရှိကို တရားဝင်လျှောက်ထားကြည့် ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် စည်ပင်အမည် ပေါက် ပါမစ်မြေများကို ယခုအခါ ပို၍ ဝယ်သင့်ပါကြောင်း
Myanmar’s New Condo Law: What Foreign Investors need to know
Only 40% of the apartments inacondominium can be purchased by foreigners. It is unclear whether this restriction refers to 40 per cent of the total number of units, or the gross square footage of the development. It is likely that developers will want to structure investments which are the most favourable and allow the optimal percentage of foreign ownership under the Condo Law.
Rentingaproperty in Yangon and what you need to know